NGABA INGCEBISO KUWE NGAPHAMBI KOMTSHATO? INDLELA YOKUGQIBA - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane Ngaba ukuCetyiswa kuQinisekisiwe kuwe?
Ngaba ukuCetyiswa kuQinisekisiwe kuwe?
Siphula izibonelelo zokufumana iingcebiso ngaphambi kokuba sithi 'ndiyayenza.' iStock Ukuhlaziywa ngoJulayi 16, 2020
Cinga ingcebiso ngaphambi komtshato yenzelwe abantu abaneengxaki? Cinga kwakhona. Ngokubhekisele kuthi, awunakuphulukana nayo kwaye yonke into ukuzuza ngokuqala ngaphambi kokuba utshate. Nantsi into onokuyilindela kwingcebiso ngaphambi komtshato, kunye nezibonelelo zokufumana iingcebiso ngaphambi komtshato.
Ixesha yinto yonke
Ngaphambi komtshato Iingcebiso zinoncedo olunye olwahlukileyo: Ukufunda indlela yokunxibelelana kunye nokusebenza ngeengxaki kulula kakhulu ngaphambi komtshato kunokuba kube yiminyaka emininzi emva. Xa sele utshatile, nobabini ninolindelo olungathembekiyo komnye nomnye, ungaze ucinge ngamanye amaxesha izimvo ezingeyonyani ukusuka ebuntwaneni bakho malunga nobomi bomtshato kufanele Yiba ngathi. Ngaphambi komtshato, usesesebangeni lokwakha — ulindelo lukhona, kodwa kulula ukuba uthethe phandle ngezinto ezisongela ubunzima. Kwaye ngokufunda indlela yokuthetha ngumahluko, uya kwenza imikhwa elungileyo eya kukuhambisa kule minyaka idlulileyo.
Kukho iindlela ezininzi zokujongana nokufumana umcebisi olungileyo ngaphambi komtshato. Eyona nto ixhaphakileyo inokuba kukutyelela ugqirha wengqondo, ugqirha wezonyango okanye intloko yeziko lenkolo (elinokufuneka xa utshata kwindlu yonqulo). Kodwa kweli lizwe lihambayo, awudingi nokushiya ikhaya lakho ukuze uvune izibonelelo zokufumana iingcebiso ngaphambi komtshato. Ngena Ihlala ihleli , i-app esekwe kwisayensi exhaswa yi-Knot ezinikele ekuphuculeni impilo yomtshato wakho (wexesha elizayo) okanye ubudlelwane. Uhlelo lokusebenza ngobuhlakani luyazi ubudlelwane bakho kwaye emva koko lwakha inkqubo eyenzelwe wena kunye nomnye obalulekileyo. Yenzelwe zonke izibini, njengokucebisa ngaphambi komtshato, nokuba awukaze wonwabe ngakumbi okanye uhambe kwinqanaba elibi.
Iingcebiso ngaphambi komtshato (nokuba kungomntu okanye kwi usetyenziso ) inokukunceda uqaphele apho wena neqabane lakho nimi kwimixholo eyahlukeneyo, kunye nalapho izinto eziphambili zibekwe khona. Oku kuyakunceda ukuqinisekisa ukuqonda kwakho njengabantu abatshatileyo-okanye, kwezinye iimeko, vulani amehlo enu ekubeni nifuna izinto ezahlukeneyo. Ke, uya kuthetha ngantoni ngaphambi kokutshata? Inkolo, abantwana, ezemali kunye nemicimbi yosapho, zizihloko nje ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe.
Ke uyazi njani ukuba ingcebiso ngaphambi komtshato yeyakho? Ngokoluvo lwethu, yeyomntu wonke. Lonke ulwalamano lunakho kwaye lufanele ukuxhamla kuhlobo oluthile lwengcebiso. Kodwa ngakumbi ezo zibini zifuna ukuqhubeka nokusebenza kwizinto ezinjengokwazi ukunxibelelana ngempumelelo nabanye. Yonke imitshato izisa ubunzima kunye nezithintelo, kwaye unxibelelwano luya kuba lolokukunceda woyise. Ukuba unengxaki yokuthetha ngemicimbi ebomini bakho-kwaye sithetha njalo ngokwenene ukuthetha — kububulumko ukufunda indlela yokwenza ngoku, xa nithembisene ngomtshato.
indlela yokukhetha iilokhwe zintombi
Apho Uya khona
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, indlu yokunqula okanye abacebisi basekuhlaleni bangaphambi komtshato zihlala zikhetha, njengamaziko oluntu asekuhlaleni anokunika iindibano zocweyo zomtshato. Nangona kunjalo, ukuba awonwabanga ngonyango lobuchwephesha, awunakho ukuyifumana okanye isibini esine-tech-savvy esifuna into elula ngakumbi (ngelixa sinempembelelo), Ihlala ihleli inokuba yile nto nje.
ngowuphi umsesane womtshato
U-behati prinsloo kunye ne-adam levine amakhonkco omtshato
yintoni ubudala beminyaka yomtshato
ufuna ntoni ukutshata kwi-nc